SomaliTalk.com » 2010 » July » 10
Home » Archive Maalinta July 10th, 2010
Talo iyo baraarujin ku socota dadka reer Puntland. Marka hore mahad idilkeed waxaa iska leh Allaah naxariis iyo nabadgelyana Rasuulkeenii ayeey korkiisa ahaatay. Intaas kadib dhammaan akhristayaasha sharafta iska lahoow iga gudooma salaanta islaamka Asalaamu caleykum waraxmatulaahi wabarakaat. Dunidan aynu ku noolnahay maalin walbaa ummaddu waxa ay sameysaa horumar iyo ka ambaqaadid hadba heerka la...
Dhalinyarro Soomaaliyeed oo lagu diley Wadanka Koonfur Afrika
Kooxo Hubaysan ayaa dil ugu geysteen 2 Dhalinyarro Soomaali ah Deegaanka Even Park ee hoostaga Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Marxuumiinta oo la kala oran jiray Maxamed Cali Xassan 22 jir iyo Mukhtaar Cali Dhuxulow 35 jir ayaa waxaa lagu weeraray xili habeenimo ah iyaga oo ciyaartii Spain iyo Germany ku daawanayay meel Dukaan ah oo ay ku ganacsan jireen. Sidoo kale weerarka ayaa waxaa...
11-kii July 2005 waxay ku beegan tahay markii la diley Alla u Naxaristee Cabduqaadir Yaxye Shiikh Cali waxaana ka soo wareegtey Muddo Afar Sanno ah , Cabduqaadir wuxuu ahaa Halyeygii nabadda iyo doodihii dadka taagta daran waxaana dilkaasi uu xasuus ma hadho ah ku reebay bulshada weynta Soomaaliyeed, waxayna markii ay maqleen gurigiisa ku xoomay dadweyne aad u fara badan oo ilmeynayay kuwaas oo ka...